ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၈-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၈-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အဓိက ပြင်သင့်တာတွေ NLD က မကြာခင် ထုတ်ပြန်မယ် click
- ခေတ်နဲ့အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား click
- NLD ပထမဆုံးအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပ click
- NLD ပထမအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး (ရုပ်သံ) click
- ရိုဟင်ဂျာ တမိသားစု ကလေး ၂ ဦး ပေါ်လစီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန် click
- တအိမ်ထောင် ကလေးနှစ်ယောက်ထက် ပိုမယူရတဲ့အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန် click
- ရခိုင်ပြည်နယ် နှစ်မြို့နယ်မှာ မွေးဖွားနှုန်း သတ်မှတ်တာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှုတ်ချ click
- ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးရ မြစ်ကြီးနားမှာ ဒီနေ့ စဆွေးနွေးမယ် click
- ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ တက်ရန် KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြစ်ကြီးနား ရောက်ရှိ click
- ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင် click
- အစိုးရနဲ့ KIO ဆွေးနွေးပွဲ အလားအလာ click
- ငြိမ်းချမ်းရေး မဆွေးနွေးခင် မြစ်ကြီးနား အခြေအနေ (ရုပ်သံ) click
- ရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ လယ်မြေ သိမ်းဆည်းမှုများ ရပ်တန့်ပေးဖို့ ကချင်ဒေသခံများ တောင်းဆို click
- ဖားကန့်မှာ ရေမဆေးကျောက်သမားတွေကို ဖမ်းဆီး click
- ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လက်နက်တွေ ဖမ်းဆီးမိ click
- ၈၈ မျိုးဆက် မင်းကုိုနုိုင်၊ ကိုကိုကြီး ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ မြန်မာမိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံ click
- မစုစုနွေး ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ click
- ကျေးဇူးရှင်တွေ ပေါတယ် များတယ် .. ဆပ်လုို့ရယ် ကုန်နုိုင်ပါ့မလားကွယ် (ဆောင်းပါး) click
- ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် (ရုပ်သံ) click
- ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် (ရုပ်သံ) click
- သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မယ့် အခြေအနေ click
- မြန်မာနိုင်ငံ သောက်သုံးရေ ရရှိဖို့အတွက် အမေရိကန် ကူညီ click
- သောက်သုံးရေရှားတဲ့ ဒေသတွေကို P&G နှင့် USAID တို့က ရေလှူမည် click
- နွေရာသီသင်တန်းဆင်းပြီ click
- မျက်မမြင်များအတွက် အီလက်ထရောနစ် စာကြည့်တိုက် (ရုပ်သံ) click
- ရန်ကုန်မြို့က ပြည်သူ့ပန်းခြံများ (ရုပ်သံ) click
- သမိုင်းတကွေ့မှ နိုင်ငံခြားသားများ - အိန္ဒိယနန်းကျဘုရင် ဗဟာဒူးရှားဇဖားရ် (ဆောင်းပါး) click
- စစ်အာဏာရှင်တို့၏ သွားရာလမ်း … ထမင်းဆိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင်၊ ပန်းချီခန်း … (ကာတွန်း) click
- သူများထောင်းမှာ ကြောက်လုို့ (ကာတွန်း) click
- ဆီးရီးယားအရေး အီးယူမှာ ဆွေးနွေး click
- ဆီးရီးယားကို လက်နက်ရောင်းမှု ပိတ်ထားတာ ဖယ်လိုက်ပြီ click
- ဆီးရီးယားအတိုက်အခံကို EU လက်နက် ထောက်ပံ့ဖို့ လမ်းပွင့် click
- ကျဆုံးစစ်သည် အောက်မေ့ဘွယ်နေ့ အမေရိကန်တ၀ှမ်း ကျင်းပ click
- အမေရိကန်-တရုတ် ဆက်ဆံရေးရဲ့ အရေးကြီး လမ်းဆုံလမ်းခွ click
- တောင်ပိုင်းဆူဒန်ကို ဘတ်ရှီယား ခြိမ်းခြောက် click
- သူပုန်တွေ လက်ချက်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ရဲတွေ သေဆုံး click
- ကမ္ဘာကျော် မိုက်ခရိုဆာ့ဖ်ကုမ္ပဏီက မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ xbox one ဂိမ်းစက် အကြောင်း (အသံ) click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 11:53 AM
ကျနော် လူပိန်းတွက်၊ တွက်ကြည့်တယ်။ ဆတိုးကိန်းရဲ့ သဘောက မယုံနိုင်စရာ အင်မတန် ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဘင်္ဂလီတွေအနေနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ကလေး(၁၀)ယောက်နှုန်းလောက်မွေးနေတာဟာ သူတို့ရဲ့ လူမှုဘ၀၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဘယ်လောက်ထိများ ခက်ခဲမလဲဆိုတာ တွေးမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဘာသာရေးဆရာကြီးတွေက မိန်းမလေတွကို လူထုတ်စက်တွေလို သဘောထားပြီး အစွမ်းကုန် မွေးဖွားခိုင်းနေကြတာပါ။
ဒီနှုန်းနဲ့သာ ကလေးမွေးကြရင် လက်ရှိ ဘင်္ဂလီ(၈)သိန်းမှာ ဖြစ်တန်စွမ်းအရ အမျိုးသမီး (၄)သိန်းပါဝင်တယ်ပဲထား။ အသက် ၁၄-၁၅ ၀န်းကျင်မှာ အိမ်ထောင်သားမွေး လုပ်ကြတယ်။ သူတို့မွေးလာကြတဲ့အထဲမှာ မိန်းကလေးပါဝင်နှုန်း(၅၀%)နှုန်းပဲထား..
အဲဒီနှုန်းနဲ့သာ မွေးကြရင် နှစ်၃၀ မျိုးဆက်နှစ်ဆက်လောက်မှာ ဘင်္ဂလီ မိန်းကလေးဦးရေ ချည်းပဲသန်း(၆၀)ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ယောက်ကျားလေးတွေရောဆိုရင် စုစုပေါင်း လူဦးရေသန်း၁၂၀။
ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ ဒါနှစ်(၃၀)၀န်းကျင်နဲ့ ဖြစ်လာမယ့် လူသစ်ချည်းတွက်ထားတာ လူဟောင်းမပါသေး ပါဘူး။ ခန့်မှန်း တွက်ထားတာပါ။
နှစ်(၃၀)အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိလူဦးရေရဲ့ နှစ်ဆမက ဖြစ်လာမှာပါ။
အဲဒီလူတွေကို လက်ရှိနိုင်ငံသား ဖြစ်မှုဥပဒေအရ နိုင်ငံသားအဖြစ် မဖြစ်မနေ လက်ခံပေးရမှာပါ။
မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး မြင့်မားတဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးပြု မျိုးဆက်တွေ ဆိုရင်တော့တော်ပါသေးရဲ့။ အဲလိုမှ မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအပေါ် အကောက်ကြံမဲ့၊ ပညာမတတ်၊ အတွေးအခေါ် နိမ့်ပါးသူတွေဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ပုံပြင်တစ်ခုလို ဖြစ်သွားမှာပါ။ သေချာတာကတော့ မြန်မာမွတ်ဆလင်နိုင်ငံကြီး ဖြစ်လာမှာက မလွဲပါဘူး။
စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးက မပြည့်စုံတဲ့ကြားထဲ လူဦးရေတိုးပွားရေးကိုသာ ဘာသာရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြပြီး ဗျူဟာတစ်ခုလို အဓိကထားပြီး လုပ်နေကြရင်တော့ ဒါကို လက်ခံနိုင်စရာလို့ မမြင်မိပါဘူး။
နိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်တွေက ဘယ်လို မြင်ကြတယ်တော့မသိပါ။
ကျနော့အနေနဲ့ကတော့ ပိန်းတယ်လို့ ပြောတယ်ဆိုရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။
သမရိုးကျသဘောနဲ့ လူဦးရေထိန်းချုပ်တာဟာ သူတို့ရဲ့ ဘ၀မြှင့်တင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်အရဆိုရင် လုပ်သင့်တယ်လို့ပဲ နားလည်မိပါတယ်။
ပွကြီးသီအိုရီ။ ပေါ်ပြူလာသီအိုရီ တို့နဲ့ မသိနားမလည်တဲ့ ပြည်
သူကြားမှာ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းပြီး နှမ်းဖြူးသွားလိမ့်မယ်။
ဝန်ထမ်းနဲ့ ပြည်သူက အသုံးချခံဖြစ်နေတုန်းပဲ။
မြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ. အားလုံးတော.မတူပါ ။
.... ကျွန်တော. အိမ်မှာ မွတ်ဆလင် တစ်ဦး ဘောလုံးပွဲ
လာကြည်.တယ်၊ ကြာပီ ၊ တီဗွီမှာ မြန်မာနဲ. မလေးရှား ကန်နေကြတယ် ၊ မလေးရှား က မြန်မာ ဂိုးပေါက်ဆီကန်
သွင်းတိုင်း ထအော်ပြီး မလေးရှားကို အားပေးတယ် ၊
မေးကြည်.တော. ကျွန်တော်တို. အစ္စလမ် နိုင်ငံကို ဘဲ
အားပေးမှာပေါ. .... လို.ပြောတယ် ၊
... ကိုယ်တွေ.တစ်ခုပါ ၊ ဘာသာရေး လှုံ.ဆော်တာမဟုတ်ပါဘူး ။ စဉ်းစားကြပါ ။
နိုင်ငံ တော်ရဲ. ဘင်္ဂလီ တမိသားစု ကလေး ၂ ဦး ပေါ်လစီက မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် FAIR ဖြစ်ပါတယ် ၊
ဘင်္ဂလီ တမိသားစု ကလေး ၂ဦး က များတယ်လို.တောင်ထင်ပါတယ် ။